डाक्टर श्रीमानको कुटाइबाट घाइते सुनीताको मृत्यु - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > डाक्टर श्रीमानको कुटाइबाट घाइते सुनीताको मृत्यु
March 29, 2019 March 29, 2019 GRISHI438
वीरगञ्ज । चिकित्सक श्रीमानको कुटाईबाट गम्भिर घाइते भएकी महिलाको उपचारका क्रममा निधन भएको छ ।
सुनीता नारायाणी अस्पतालमा कार्यरत मधुमेह तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा. सचितानन्द यादवको जेठी श्रीमती हुन् । उनलाई यादवले निर्घात कुटपीट गरेको आरोप माइती पक्षको छ ।
‘अपरान्ह उनको मृत्यु भएको खबर हामीलाई आएको छ’ उनले भने, ‘डा. एसएन यादवले आइरन तताएर डाम्नुको साथै निर्घात कुटपीट गरेको जानकारी हामीसँग छ । उनी र उनको परिवारका सदस्य विरुद्ध उजुरी पनि दिएका छौं । कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’
डा. सचितानन्द वीरगञ्जमा डा. एसएन यादव नामले परिचित छन् । चैत ६ गते बुधबार होलीको दिन राति डा. यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २० स्थित हरपतगञ्जमा सुनितालाई निर्घात कुटपिट गरेको दाबी माइती पक्षले गरेका छन् ।
बिहीबार उनलाई अचेत अवस्थामा उद्दार गरेर उपचारका लागि गण्डक अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्दा पनि अवस्थामा सुधार नआएपछि चैत १२ गते थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
शुक्रबार अपरान्ह उनको निधन भएयको छ । उनका श्रीमान डाक्टर यादव प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएपछि डा यादव नारायाणी अस्पतालको आईसीयुमा उपचाररत छन् । प्रहरीले पर्सा जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक पाएको तीन दिनको म्याद सकिएपछि दोस्रो पटक ७ दिनको म्याद पाएको छ ।
सुनीता यादवका माइती पक्षले डा सचितानन्द यादव, बुवा नागेन्द्र यादव, आमा आशादेवी र भाइ अचितानन्द यादवविरुद्ध चैत १२ गत नै मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले प्रहरी नियन्त्रणमै उनको उपचार भइरहेको बताए ।
अन्य आरोपीको खोजी भइरहेको उनले बताए ।
@NAYA_PATRIKA नयाँ पत्रिकामा छापिएको कार्टुन
कीर्तिमानी खेलाडी दिपक बिष्टकाे जीवन कथा
August 3, 2019 August 3, 2019 Raju Thapa